Shaqo joojin lagu sameeyay wasiir dowle aamar jebiyay - Awdinle Online
Shaqo joojin lagu sameeyay wasiir dowle aamar jebiyay
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shaqo joojin ku sameeyay Wasiiru dowlihii Wasaaradda Dastuurka Hirshabeelle Xildhibaan Saadaq Mukhtaar Cabdulle.
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne Waare ayaa shaqada looga jooiyay Xildhibaan Saadaq Mukhtaar oo ahaa Wasiiru dowlihii Dastuurka Hirshabeelle, waxaana lagu eedeeyay inuu jebiyay amar kasoo baxay Madaxweyne Waare.
Xildhibaan Saadaq Mukhtaar ayaa la sheegay inuu shalay Magaalada Jowhar uga qeyb galay Munaasabad ka dhacday Jowhar, xili Madaxweynaha Hirshabeelle uu mamnuucay in dadka isugu yimaadan Munaasabad, sababo la xiriira faafida Cudurka Coronavirus.
Hoos ka Akhriso Wareegtada shaqo joojinta ee uu soo saaray Waare.
Previous articleNin hubeysan oo toogasho ka geystay degmada Kaxda
Next articleKhilaaf soo kala dhexgalay Puntland iyo Hir-Shabeelle.